Kurumidza Munamato Wekuporesa | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Kurumidza Kunamatira Kwekuporesa
Kurumidza Kunamatira Kwekuporesa
Nhasi tichave tichitaura nemunamato wekukurumidzira kupora. Pane nguva muhupenyu hwedu kuti izvo zvatinoda kuti tirarame panguva iyoyo ndiwo maoko anokurumidza aMwari. Pakati peino nguva, tinogona kushaiwa kana zvakawanda zvekutaura panzvimbo yeminamato nekuti isu tashushikana, ndosaka tichifanira kuzvivakira munzvimbo yemunamato uye munzvimbo yekudzidza izwi.
Kana isu tiri panguva yakaoma, zvinowanzoitika pakati pevanhu kuti vataure kuna Mwari nekurega njodzi yakadaro iitika kwavari, zvakadaro, chatinoda panguva iyoyo hakusi kupomera Mwari, tinoda kutaura naMwari tichishandisa ake mazwi, vachimurangarira nezve zvipikirwa zvake uye zvese zvibayiro zvedu pamberi pake. Rangarira nyaya yaMambo Hezekia apo muporofita waMwari akauya neshoko rerufu kwaari kuti achafa. Panguva iyoyo yakaoma yekurwara, Mambo Hezekia aisakwanisa kuita zvakawanda pane kutaura naMwari muminyengetero. Akayeuchidza Mwari nezvese zvaakavimbisa kwaari uye akayeuchidza Mwari nezvezvibayiro zvake kuzvinhu zvaMwari. Mwari akashandura pfungwa dzake uye akawedzera kune ake makore.
Saizvozvo, muhupenyu hwedu, pane dzimwe nguva dzehupenyu hwedu idzo, panzvimbo pekutaura kuna Mwari, tichibvunza kana aive bofu kana matsi kuti akabvumidza zvakaipa kuti zviitike kwatiri, chatinoda kutaura kuna Mwari muminamato. Tinofanira kudzidza kuyeuchidza Mwari nezve zvipikirwa zvake kwatiri. Munyaya ino, tichave tichiongorora munamato wekukurumidzira wekupora, unozove unotsigirwa neshoko raMwari nekuti isu zvakare tinoda izwi raMwari. Zvichakadaro, izwi raMwari mune ino mamiriro ichave iri yezvimwe zvipikirwa zvaMwari kuvanhu kuti vatipe hutano hwakanaka. Nguva zhinji, mazwi aya anotsamwa anoshamisa; zvinoita kuti Mwari vachinje pfungwa dzake uye vatiponese. Bhaibheri rinotiita kuti tinzwisise kuti Mwari anokudza izwi rake kunyangwe zita rake. Rugwaro runoti kunyangwe matenga nepasi zvichipfuura, hapana kana remashoko ake anoenda pasina kuzadzisa chinangwa chawakatumirwa.
Izvi zvinoita kuti tizive kuti imwe yedzakanakisa nzira dzekuita kuti Mwari ashande kubudikidza nemashoko ake. Rega nekukurumidza kukubvise iwe kuburikidza nemimwe minamato yekukurumidzira yekurapa iwe yaunoda kana iri mumamiriro ezvinhu akaoma.
Rugwaro rwacho runoti handife asi ndichararama kuti ndiparidze mabasa aIshe munyika yevapenyu. Ndinotsiura mhando dzese dzerufu muzita raJesu. Ndinoraira nesimba redenga kuti ndinopora muzita raJesu. Ishe, netsitsi dzenyu dzinogara nekusingaperi, ndinonamata kuti muzondiporesa nemuzita raJesu. Ndinotenda kuti unokwanisa kundisunungura kubva kuzvirwere izvi, ndinoziva kuti ukangondibata zvese nezve hutano hwangu zvichachinja, Ishe Jesu, ndinoda kubata kwako, kubata kwako kwaMwari Ishe Jesu.
Ndiporesei Jehovha, ipapo ndichaporeswa; ndiponesei, uye ndichaponeswa, nokuti ndimi wandinorumbidza. ” Jeremia 17:14
Baba ishe, ndoziva kuti hapana chinhu chausingakwanise kuti uite. Ini ndinokumbira kuti uratidze hukuru hwako pamusoro pehutano hwangu. Iwe wakati iwe uri Mwari wenyama yese, uye hapana chinhu chausingagone kuita. Iwe wakataura nebvupa rakaoma, uye rinowana hupenyu zvakare, iwe wataura neshizha rakaoma, uye rikazova mupenyu zvakare, ndoziva kuti kana wabata maoko angu, zvese zvinogoneka, Tenzi Jesu, ndinonamata kuti mubate ini muzita raJesu.
Naizvozvo usatya, nekuti ndinewe; usavhunduka, nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa uye ndichakubatsira; Ndichakutsigira neruoko rwangu rwerudyi. ” -Isaya 41:10
Baba vari kudenga, ndinouya kuzopesana nesimba rese rehurwere pamusoro pehupenyu hwangu, dhimoni roga roga iro rakapihwa ini nemuvengi kuti ndishungurudzire kupora kwangu, simba rese remadzitateguru rakapihwa kwandiri kudzikisa nzira yangu yekurapa. moto waMwari uri pauri nhasi muzita raJesu. Dai moto unoparadza waJehovha wavhenekerwa pamusoro penyu mose muzita raJesu.
Baba Ishe, ndinorega kubva pane zvese uye kusungwa kwehurwere. Rugwaro runotaura kuti nekuzodza, joko rega rega rinofanira kuparadzwa. Ini ndinouya kuzorwa nejoko rega rehurwere nezvirwere muhupenyu hwangu, uye ndinozviparadza nekuzodza muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti muviri wangu itembere yaMwari mupenyu; saka, hapana chakaipa chinofanira kuva nenzvimbo mazviri. Ndiri kukutumira kurongedza iwe simba rehurwere muhupenyu hwangu, uye ndinokuparadza muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti, muti wese usina kudyarwa nababa vangu uchadzurwa, muti wega wega wekurwara, muti wega wechirwere, ndinokurayira kuti unorasikirwa neupenyu hwako muzita raJesu. Ini ndinokuzivisa kusunungurwa kwangu pasimba rehurwere, ndinotaura ndakasununguka kubva pakurwadziwa kwechirwere muzita raJesu.
Rugwaro rwunoti Kristu akazvizivisa pamusoro pedu hutano hwese, uye akaporesa kurwara kwedu kose, ini ndinosimbisa muzita raJesu kuti marwere angu ese akapora munaJesu. Ndakamira ndakayenderana neshoko raMwari iro rinoti anoziva hurongwa hwaanondiitira; Ivo zano rezvakanaka kwete zvakaipa kuti undipe mugumo unotarisirwa. Ishe Mwari, rufu rusina kumboitika harutombo mugumo unotarisirwa. Ini ndoziva kuti haimbofi zvirongwa zvako zveupenyu hwangu kuve wakavharwa nechirwere chakaramba kuenda, ndinonamata kuti nesimba riri muzita raJesu, kurwara kwakadaro kwakafa. Ini ndinowanazve sununguko yangu pasimba rehurwere muzita raJesu.
Previous nyayaMupfupi Munamato wekuporesa uye Kupora
inoteveraMunamato weKukweretwa Kukweretwa uye Kuputswa Kwemari
Lambart mhanza phiri Ndira 5, 2021 At 10:43 pm
agnaldo minoru hasegawa Ndira 23, 2021 At 10:29 am
Ndokumbirawo mubatsire kunamatira luis kiyoshi hasegawa -for luisa matiko hasegawa uye yako mhuri
agnaldo minoru hasegawa Ndira 23, 2021 At 10:31 am
ndokumbirawo mubatsire kunamatira mauro akira hasegawa nemhuri yako
agnaldo minoru hasegawa Ndira 23, 2021 At 10:32 am
ndokumbirawo mubatsire kunamatira marcia aiko hasegawa -for agilma mitsuko hasegawa and your family
30 minamato yeKununura Kuti Titaurwe Kunze